I-Afriforum ivulele icala uMalema nabanye abaholi ngolwakwa-H&M | News24
I-Afriforum ivulele icala uMalema nabanye abaholi ngolwakwa-H&M
Pretoria – Inhlangano yomphakathi i-AfriForum ngoMsombuluko ivulele abaholi be- Economic Freedom Fighters (EFF) amacala okugquqguzela udlame emphakathini, kulandela ukucekelwa phansi kwezitolo zakwa-H&M kuleli ngempelasonto.
“Sivulele amacala amalungu amathathu e-EFF, uJulius Malema, Floyd Shivambu noMbuyiseni Ndlozi. Lokhu kumayelana nokugqugquzela kwabo udlame emphakathini, okubalwa nezigameko esizibone zenzeka ezitolo zakwa-H&M ezweni lonke,” kusho iphini lesikhulu esiphezulu kwi-AfriForum u-Ernst Roets etshela izintatheli esiteshini samaphoyisa eBrooklyn ePitoli.
OLUNYE UDABA: Kuboshwe ilungu le-ANC ePhalamende ngecala lokweba
Izitolo zakwa-H&M eSandton City naseMenlyn Mall nakwezinye izingxenye zaseGauteng zicekelwe phansi, ‘ngamalungu e-EFF’.
“Sikhathazekile kakhulu ngalokhu, ngoba abantu bagqugquzelwe ukuba basebenzise udlame, benze namacala embhkishweni.
“Lento akumele ithathwe kancane, ikakhulukazi njengoba abantu begqugquzelwe ngosopolitiki abanamandla ezimpilweni zabantu.”